Tag: ဖောက်သည်သုံးသပ်ချက်များ Martech Zone
သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 30, 2015 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 31, 2015 Douglas Karr
Amazon, Angie's List, Trustpilot, TripAdvisor, Yelp, Google My Business, Yahoo! ဒေသတွင်းစာရင်းများ၊ ရွေးချယ်မှု၊ G2 လူအစုအဝေး၊ TrustRadius၊ TestFreaks၊ ဘယ်? ။ Salesforce AppExchange, Glassdoor, Facebook Ratings & Reviews, Twitter နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုဖမ်းယူဖော်ပြရန်နေရာအားလုံးရှိသည်။ သင်ဟာ B2C လား B2B ကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မင်းအကြောင်းအွန်လိုင်းမှာရေးတဲ့တစ်ယောက်ယောက်ရှိနိုင်တယ်။ ထိုအွန်လိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတစ်ခုသက်ရောက်မှုရှိခြင်းနေကြသည်။ ဂုဏ်သတင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ဂုဏ်သတင်းစီမံခန့်ခွဲမှုသည်စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်